आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण १५ गते शुक्रबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण १५ गते शुक्रबार
साउन १५, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण १५ गते शुक्रबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई ३० तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावणकृष्णपक्षको षष्ठी तिथि विहान ५:३० बजेसम्म, त्यसपछि सप्तमी रहनेछ ।
मेष : बाह्रौं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले अनावश्यक झमेला आइलाग्नेछ । अवसरलाई चिन्न नसक्दा महत्वपूर्ण मौका गुम्नेछ । व्यर्थको कार्यमा समय वित्नेछ । ठूलो लगानि एवं टाढाको यात्रा नगर्नुहोला ।
वृष : लामो समय पछि मित्र मिलन हुनेछ । हर्षको खबर सुन्न पाइनेछ । आकस्मिक लाभले मन फुरुड्ड बन्नेछ । आर्थिक अवस्था बलियो रहनेछ । इष्टमित्रसँगको रमाइलो पल वित्नेछ । काम गरेर सन्तुष्टि मिल्नेछ ।
मिथुन : ठूला व्यक्तिसँग आत्मियता रहनेछ । सानो प्रयासबाट नै ठूला काम बन्नेछन् । कर्मभाव बलियो रहनेछ । नयाँ सम्झौताको अवसर मिल्नेछ । मानसम्मान एवं प्रतिष्ठा मिल्नेछ । समग्रमा दिन शुभ रहनेछ ।
कर्कट : परिश्रम गरेतापनि प्रतिफलका लागि धेरै समय पर्खनु पर्नेछ । धार्मिक चिन्तन रहला । परोपकारी कार्यमा मन जानेछ ।सानातिना झमेलाले छाड्ने छैन । पूर्व तयारी र योजना बनाएर कार्यमा निष्कनु होला ।
सिंह : सोच्दै नसोचेका समस्याहरु आइ लाग्ने छन् । हतारको निर्णय र बोलिले समस्यामा पार्नेछ, संयम रहनु होला । तपाईँको दु:खको परिश्रम अरुले नै लिनेछन् । पारिवारिक समस्याले गर्दा काम गर्ने वातावरण बन्ने छैन ।
कन्या : तपाईँको काम गर्ने शैलीले समाजमा बेग्लै तरंग पैदा गर्नेछ । व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ । दाम्पत्य सहयोग मिल्नेछ । सोचेका र थालेका धेरै कार्यले स्थान पाउने छन् । मनोरञ्जनमा सहभागी भइनेछ ।
तुला : सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ्नेछ । कृति प्रदायक कार्य गर्न सकिने छ । विपक्षीहरु पनि सहमतिमा आउन बाध्य हुनेछन् । नोकरीमा सामान्य परेशानि व्यहोर्नु परेता पनि व्यवसायबाट भने लाभ मिल्नेछ ।
बृश्चिक : आपसी तालमेल नमिल्दा साझेदारी कार्य विवादित बन्न सक्छ, सतर्क रहनु होला । आर्थिक अवस्था मध्यम रहनेछ । पढाइमा खासै मन जाने छैन । अवसर मिल्दा मिल्दै पनि घरायसी समस्याका कारण मौका फुत्कनेछ ।
धनु : जिद्दि गर्ने बानिका कारण आफन्तजनसँग नै विवाद पर्नेछ । आँफैले गरेका कार्य आँफैलाई चित्त बुझ्ने छैन । अनावश्यक कार्यमा हात हाल्दा विवादित भइनेछ । मातृ पक्षको साथ सहयोगले कार्यको आरम्भ गर्नुहोला ।
मकर : आफ्नो क्षमताको विकास गर्न सकिनेछ । काम गर्ने जोश जाँगर आउनेछ । नयाँ वस्तुको उपभोग गर्न पाइनेछ । मिहिनेती बानिले गर्दा धेरै व्यक्तिको प्रीय बनिनेछ । आत्मकारक ग्रहको पूर्ण रुपमा साथ मिलेको छ ।
कुम्भ : आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ । बन्नै आँटेका कार्यमा पनि बोलीकै कारण अवरोध आउनेछ । विपक्षीले आस देखाएर विश्वासघात गर्न सक्छन्, प्रलोभनमा नपर्नुहोला । नयाँ योजना भन्दा दैनिकीमा नै लाग्नुहोला ।
मीन : सत् कार्यको आरम्भ गरिनेछ । टाढिएका आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । नयाँ कार्यको थालनि गरिनेछ । मन, बचन र कर्मको तालमेल मिल्दा लक्ष्यमा पुग्न सहज हुनेछ ।समर्थकहरु बढ्ने छन् ।